Umculo ku-YouTube uyakusivumela ukuba sidlale umculo ogcinwe kwisixhobo sethu | I-Androidsis
Iinkonzo zokusasaza umculo kunye nevidiyo zifezekisile ukunciphisa amaqondo aphezulu obugqwethaUbu Piracy obuyinciphise kakhulu ingeniso yeenkampani ezirekhodayo kunye ne studio ezinkulu nezincinci, nangona kunjalo isekude ukuba isuswe ngokupheleleyo, kuba kwamanye amazwe kubiza kakhulu kwamanye amacandelo abemi.
Ukuba ungomnye wabasebenzisi abasoloko bemamela kwinto enye kwaye abafuni kuxhomekeka kwinqanaba labo ledatha, kunokwenzeka ukuba bazakuqhubeka nokukhetha ube nomculo owuthandayo kwisixhobo sakho. Isithuba esingaphezulu kwenyanga, isicelo seMculo ku-YouTube sinokusetyenziselwa dlala umculo esiwugcine kwibheji yethu ngabaphathi befayile.
Nangona kunjalo, Asinakuyigcina ngokuthe ngqo kwisicelo ukuze sikwazi ukuyivelisa ngaphandle kokuxhomekeka kubaphathi beefayile. Ngethamsanqa, kubonakala ngathi loo nto sele iza kutshintsha kuba abafana abavela kuGoogle bavavanya ithuba lokuba bakwazi ukudlala umculo wethu ogcinwe kwisixhobo ngokuthe ngqo kwi-YouTube Music ngaphandle kokubhenela kusetyenziso lwefayile, inyathelo eliza kuthi ngokuqinisekileyo lisinike. ukuguquguquka okukhulu kunye nentuthuzelo kwaye oko kuya kuthetha esinye isibetho sokudlala umculo, nako kuGoogle
Kumfanekiso esikubonisa wona phezulu, sinokubona ukuba ukusuka kwithebhu yeThala leencwadi, sinokufikelela kwiifayile zeDivayisi (iiFayile zeDivayisi) apho ziboniswa Zonke iifayile kwifomathi yomculo ziyafumaneka kwisixhobo sethu. (Jonga ividiyo eqhotyoshelweyo kwintloko yeli nqaku)
Ewe, iingoma ziyafumaneka azinakongezwa nakowuphi umgca wokudlala esinawo kwisicelo. Omnye umda kukuba asizokwazi thumela umculo odlalayo ngoku kwisixhobo esixhumeneyo, nokuba likhaya likaGoogle, Sonos, Amazon Alexa okanye nasiphi na isixhobo esivumela ukuba sonwabele umculo wethu ngendlela etofotofo nangomgangatho ophezulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Umculo ku-YouTube uya kusivumela ukuba sidlale umculo ogcinwe kwisixhobo sethu